Librem 5 ichave ine simba kudarika zvataive taudzwa | Linux Vakapindwa muropa
Vazhinji venyu muchaziva Librem 5 seLinux smartphone, nhare inowana mari yakakwana yekuenda pamusika, asi izvo hazvipe hardware hombe kana kambani hombe kuseri kwayo, asi software hombe: Gnu / Linux.
Iyo smartphone inogadzirwa nePurism ichasvika mu2019 asi hazvizove sezvatainge taudzwa asi asi Ichave iine smartphone ine simba kupfuura yakataurwa mune yako tsananguro yemusangano wevanhu vazhinji.
Pakaunzwa Librem 5 kwatiri, nharembozha yaive yakavakirwa paFreescale SoC, iyo i.MX6. Inonyatso kuzivikanwa uye yekare SoC asi inokwana kuita akawanda mabasa anomhanya pane Linux inoshanda sisitimu. Munguva pfupi yapfuura iyo purism timu yazivisa kuti SoC yakadai haizovapo mufoni asi ichave iripo modhi ine simba uye yakagadziridzwa, kunyanya iyo Freescale i.MX8, nyowani uye inoshanda processor inoita kuti ive nesimba rakakwirira uye kuita kuri nani.
Iyo skrini ye smartphone haizove diki zvachose, chimwe chinhu chinobatsira kana tichida kushandisa iyo smartphone sekuwedzeredza komputa yedu kana laptop. Nekudaro, iyo smartphone ichave iine 5-inch kana 5,5-inch skrini ine resolution ye 1920 x 1080 pixels, chisarudzo chepamusoro chekuti makomputa mazhinji aripo anoshandisa Gnu / Linux anogona kunge asina.
Dare rePurism rakasimbisa kuti rinoenderera mberi kushanda pamwe chete neGnome neKDE mapurojekiti, chimwe chinhu chinonakidza, nekuti hazvizongobvumidze vashandisi veLibrem 5 kuti vashandise ma desktops aya pane mbozhanhare yavo asi zvinobatsirawo kugadzira iyo "Convergence" ine mukurumbira pakati penhare nekombuta izvo zvisati zvavapo uye zvinogona kuvapo zvakakwana nekuda kweGnu / Linux .
Nehurombo, mukuona kweiyi nhau, isu tine yakashata nhau iyo Izvo hazvizove kusvika 2019 apo patinogona kuve neiyi smartphone mumaoko edu. Nhau dzakaipa kune avo vari kutsvaga kuti vaise maoko avo panhare isiri iyo Android kana iOS, asi isu tichafanirwa kumirira kwechinguva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Librem 5 ichave ine simba kudarika zvataive taudzwa